Adelaide • Fanosorana vatana sy fanorana NuRu
Adelaide Australia dia manana tolotra betsaka. Manomboka amin'ny morontsiraka ka hatramin'ny bibidia tsara tarehy ary avy amin'ny fikosoham-batana mankamin'ny NuRu fanorana mifaly!
Aostralia, mampiseho fanangonana feno, ao anatin'izany ny zavakanto vazimba teratany tsara indrindra, ary ny South Australia Museum, natokana ho an'ny tantara voajanahary. Ny festival Adelaide ao an-tanàna dia fanangonana zava-kanto iraisam-pirenena isan-taona miaraka amina spin-off, anisan'izany ny hetsika amoron-tsarimihetsika sy sary mihetsika. Mialà sasatra aorian'izay miaraka amin'ny iray amin'ireo mpanotra mba hikosehana ny vatana erotika na Nuru massage Adelaide fomba!
Fotoana tsara indrindra hitsidihana Martsa-Mey, Sept-Nov.